Misoro yeNhau, Muvhuro Ndira 22, 2018
Mutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa vanosimuka vakananga kuDavos muSwitzerland uko vari kunopinda musangano wezveupfumi wepagore weWorld Economic Annual Forum.
Hurumende inoyambira veruzhinji kuti vangwarire kupararira kwechirwere che Cholera uye kuti vashandise nzira dzine utsanana, zvichitevera kushaya kwevanhu vanba kuChegutu.
Vanotengesera mumigwagwa vanoti havasi kuzobva munzvimbo dzavanotengesera, kunyange hazvo maawa makumi mana nemasere avakapiwa nehurumende kuti vabude munzvimbo dzavari kutengesera akwana nhasi, kukundikana kwavo hurumende ichiti ichashandisa mauto kuvaburitsa munzvimbo idzi.
Nhengo yeZanu PF inomirira Zaka East muparamende, VaSamson Mukanduri vanoshaya.
Muchirongwa cheLiveTalk na 8pm, tiri kutaura pamusoro pekupera kwemaawa makumi mana nemasere akanga apiwa nehurumende kune vanotengesera mumigwagwa kuti vabve munzvimbo dzavari kutengesera, kukundikana kwavo hurumende inozotumira mauto kunovabvisa. Asi vanotengesera mumigwagwa ava vanoti havasi kuzobva munzvimbo idzi.
Misoro yeNhau Dzanhasi, Muvhuro, Ndira 22, 2018